Steelers 'James Conner wuxuu lahaa usbuuc inuu ku noolaado kansar la'aan - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB Steelers 'James Conner wuxuu lahaa usbuuc inuu ku noolaado kansar la'aan
Qodobbada 'James Conner' ayaa lahaa wiig ay ku noolaan laheyd kansar la'aan
Haddii uu sugi lahaa hal toddobaad oo dheeri ah, waa laga yaabaa inay soo daaho.
Steelers dib ordaya James Conner ayaa ku yiri "Ya neva ogaada: waad ogtahay waxaan ula jeedo?" in markii laga helay Hodgkins Lymphoma ee 2015 in loo sheegay inuu haysto usbuuc si loo ogaado oo loo daweeyo.
Dhididka habeenkii, bro. Waxaan helayaa sida daqiiqaddii 15 ee habeen, sida, dhex mara. Hurdo ma seexan? Taasi waa tii ugu xumeyd adduunka, ”ayuu yiri Conner, kaasoo xilligaas ka da 'yaraa magaalada Pitt. Waxaan sameeyaa baaritaano qaar. Qalb ayaa iga dhacay, oo hareerahayga ku wareegsan. ... Dhakhtarku wuxuu ii sheegay in usbuuc ka hadhay. Wuxuu yiri, 'Waxaad heshay hal toddobaad. Haddii aadan tan daweyn lahayn, way sii kordhaysay. ' Waxaan ka fikiraa taas s-t maalin kasta. "
Conner wuxuu dib uga soo kabanayay dhaawaca MCL waqtigaas. Wuxuu hore ayaa u sheegay USA Today in isagu "uu ku dhiman lahaa garoonka dhexdiisa" waagii hore.
24-sano jirka waxaa la ogaaday inuu kansarka qabin ka dib qiyaastii lix bilood oo kemotherapy ah. Wuxuu ahaa kooxdii ugu horreysay ee All-ACC sanadkiisii ​​weynaa, waxaa loo diyaariyey wareegii saddexaad ee 2017 wuxuuna sameeyay Pro Bowl xilli ciyaareedkii hore maqnaanshaha Le'Veon Bell. Wuxuu u orday funaanadaha 973 iyo 12 taabashada ciyaaraha 13, isagoo ku daray xargaha 55 ee yaardooyinka 497 iyo dhibco kale.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://nypost.com/2019/07/17/steelers-james-conner-had-a-week-to-live-without-cancer-diagnosis/
Kansarku waa ku faafaa
Wadahadalka suuqa kala iibsiga: Alexis wuxuu kula biirayaa Lukaku, saaxiibkiisii ​​hore ee Man Utd, Inter?
Vanessa Paradis ayaa ka xumaatay, oo ay ka buuxsantay farxadda Lily-Rose (sawir) - VIDEO
Boqoraddu waa mid qalbi jabsan: sida saddex ka mid ah afarta carruurteeda Queen ay u jabisay qalbigeeda - Annus horribilis
India: Nin lala xiriirinayo dilkii Gauri oo lagu magac daray Kalburgi India News
Youtube: WACS. Lyon-Rennes: Gabadha ciyaartoyda ee labada kooxoodba sawirrada ku leh
DADKA & LIFESTYLE2,989